Vidio vovoka Diosmetin (520-34-3) hplc≥98% - Wisepowder
Ny vovoka Diosmetin
Ny vovony Diosmetin dia flavone an'ny sokajy O-methylated flavonoids. Ny tambiny dia aglycone de diosmin (diosmetin 7-o-rutinoside), izay manolotra voajanahary amin'ny voan'ny sitraka tahaka ny voasarimakirana.
Andriamanitrametin dia maneho ny fanoherana ny homamiadana, ny anti-inflammatory, antinociceptive ary ny anti-oxidant. Ao amin'ireo tsikombakomban'ny fikarohana dia fantatry ny mpahay siansa azy ho 3 ', 5,7-trihydroxy-4'-methoxyflavone. Samy Diosmetin sy chrysoeriol dia metilôma metabolika an'ny luteolin. Ny fihenan'ny Diosmetin ao anaty rano dia 0.075 g / L.
03 Horonantsary Diosmetin (520-34-3)
04 Fampahalalana momba an-tserasera Diosmetin
Anarana simika benzopyran-4-ny iray
Synonyms Cyanidenon-4'-methyl ether 1479, Luteolin-4'-methyl ether
Molecular Weight 300.26 g / mol
Bika Aman 'endrika mavo mavo ka hatramin'ny vovoka mavo
Antsasak'aina 22.9 hatramin'ny ora 40.1
Solubility Azo esorina amin'ny rano (<1 mg / ml). Soluble amin'ny acetonitrile, DMSO (60 mg / ml), ary ny etanol (17 mg / ml).
fampiharana famenon-tsakafo sakafo, sakafo hanina
05 Tantaran'ny Powder Diosmetin
Ny niandohan'ny fikarohana momba ny vovoka Diosmetin dia nanomboka tamin'ny taona 1920, rehefa nalaina tao amin'ny figwort izy. Efatra folo taona taty aoriana, ny mpahay siansa mpikaroka dia namantatra an'ity flavone glycoside ity ho fitaovana fanafody fitsaboana amin'ny vida. Tsara homarihina fa ny diosmin dia lohan'ity flavanoid ity. Na izany aza, azonao atao ny manavaka ny firafitr'izy ireo amin'ny alàlan'ny famakafakana NMR diosmetin.
Tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-21, ny tombam-pahalalana ara-tsiansa sy ny soatoavina ara-pitsaboana ny vovobony diosmetin dia teo amin'ny tampon-tanana. Ny mpahay siansa momba ny fikarohana izao dia mihevitra ny fitambaran-tena ho fitsaboana hafa ho an'ny homamiadana sasany.
Rehefa mandeha ny fotoana, diosmetin dia ampiasaina ho fanampin-tsakafo sakafo sy hanina ara-tsakafo.
06 Ahoana no fiasan'ny mofomamy Diosmetin?
Ny fivontosan'ny homamiadana dia tompon'andraikitra amin'ny famoizan'ny CYP1 anzima.
Ny vovoka Diosmetin dia niova ho luteolin ao amin'ny tsipika sela homamiadan'ny olombelona. Ity dingana ity dia mitranga aorian'ny 12 sy 30 ora aorian'ny fitantanana ny fanafody. Milaza ny mpahay siansa mpikaroka fa ny luteolin dia manana fananana cytotoxic mahery.
Andriamanitrametin dia manakana ny fizarana G2-M, mitondra any amin'ny fananganana p53, p51, ary p-ERK (phospho-extracellular signal-regulated kinase). Ireo proteinina ireo dia manan-danja amin'ny fivontosan'ny fivontosana na amin'ny fanesorana ny homamiadana.
07 Ny tombo-tsakafo Diosmetin
Ny iray amin'ireo diosmetin dia ny fitantanana ny kankana isan-karazany toy ny colon, prostate, breast, hepatocellular, bladder, ary ny otrikaina urinary. Ny fika iray amin'ny famahana an'io fitsaboana io dia misy fiantraikany ratsy kely raha ampitahaina amin'ny fitsaboana simika. Fa inona koa izany, somary lafo io ary tsy hisy fiatraikany amin'ny sela mahazatra.
Andriamanitrametin dia mampiseho ny voka-dratsin'ny anti-carcinogen amin'ny alalàn'ny apoptosis ary mihazona ny fihanaky ny sela homamiadana. Ao amin'ny sela hepatocellular carcinoma dia HepG2, diosmetin dia mitarika ny fisamborana G2-M ary ny fanehoana ny proteinina P53.
Ho an'ny leukemia myeloid mony, ny fitsaboana amin'ny disometin dia tara ny fitomboan'ny fivontosana noho ny fitomboan'ny kôpikô TNFα ary ny gony 8 sy 3/7, izay kofactors apoptose sela kansera.
Ny fandinihana farany dia nanamafy ny mety hisian'ny diosmetin amin'ny fanamafisana ny taolana. Sahala amin'ny apigenin, io flavonoida io dia manakana ny osteoporosis. Miasa amin'ny alàlan'ny fanamorana ny fanavakavahana osteoblast amin'ny sela MG-63 sy hFOB. Ankoatr'izany, ny diosmetin dia miteraka ny fahamatorana ao amin'ny sela stromal sisin-taolana.
Andriamanitrametin dia mampitombo ny tsiambaratelo ny osteocalcin, ny fitrandrahana mineraly, ny famokarana osteopontin, ary ny fikajiana ny karazana I collagen. Ireo antony ireo dia mitana andraikitra lehibe eo amin'ny metabolismin'ny taolana.
Miaro ny sela amin'ny vatana ny Diosmetin amin'ny adin-tsaina amin'ny oxidative amin'ny famerana ny ROS (karazana oksizenina mahery vaika). Tahaka ny naringenin, ny mpahay siansa dia mihevitra ny flavonoid ho toy ny fitsaboana fitsaboana mahomby amin'ny fitantanana ny aretin'ny atiny, izay vokatry ny fihenan-doha amin'ny oxidative.
08 Diosmetin Powder Dosis
Dokotera diosmetin mahazatra dia eo amin'ny 1000mg isan'andro. Na izany aza, ny sandany dia mety miakatra hatramin'ny 3000mg, manaraka ny fepetra tianao ho tsaboina. Ny zava-mahadomelina dia alaina amin'ny fatra roa misaraka mandritra ny enim-bolana.
09 Inona no vokatra misy an'i Diosmetin?
Diosmetin dia tena hita ao amin'ny voankazo sitraka ao anatin'izany ny voasary, mandarin, voasarimakirana, voankazo voaloboka ary rajako.
Mba hamaritana sy hamaritana ny vola ao anatin'ireny vokatra ireny dia ampiasain'ny siantifika andriamanitra specie.
10 Andriamanitrametin Research
Tsy tambo isaina ny fikarohana fikarohana izay nanala ny lanjan'ny pharmacological amin'ny metabolism diosmetin vovoka. Ny mpikaroka dia nanandrana ny flavonoid amin'ny modely murine mba hamantarana ny anjara andraikiny amin'ny ady amin'ny fivontosan'ny homamiadana. Amin'ny fanadihadiana rehetra, Andriamanitrametin dia hampiseho toetra manohitra ny homamiadana amin'ny nono, ra, tazo, aty, ary prostate carcinomas.
Ny fandinihana ihany koa dia manamafy fa miaro amin'ny ischemia / reperfusion noho io ratra amin'ny aretin-doha io flavone io. Ankoatra izany, manampy amin'ny famerenan'ny rivotra amin'ny asma mitaiza izy io.
Na dia betsaka aza ny fitsapana voajanahary hamerenana ny fahombiazan'ny diosmetin amin'ny fitsaboana ny homamiadana sy ny fitomboan'ny taolana, ny fiarovana azy amin'ny olona dia mijanona ho tsy fantatra.
Ho an'ny fitsirihana sy famaritana an-tsoratra dia mampiasa ny mpikaroka diosmetin d3.
11 Fanampiny Diosmetin
Any Etazonia sy misy firenena Eropeana sasany, diosmetin dia azo amidy ara-barotra ho sakafon'ny sakafo. Tsy misy fanoratana ny zava-mahadomelina. Ity vokatra ity dia misy eo amin'ny bioflavonoids citrus sy formulasi.
Azonao atao koa ny mividy vovoka diosmetin ho an'ny tanjona fikarohana.
1.Oak, C., Khalifa, OA, et al. (2018). Andriamanitrametin dia manery ny fihanaky ny sela homamiadan'ny olombelona amin'ny alàlan'ny fampidirana ny apoptosis sy ny fisamborana ny tsingerin'ny sela. International Journal of Oncology.
2.Patel, K., Gadewar, M., Tahilyani, V., ary Patel, DK (2013). Famakafakana momba ny aspetin'ny pharmacological sy ny analytical an'i Diosmetin: tatitra momba ny fananana. Gazety Shinoa momba ny fitsaboana iraisana.
3.Y-Ling Hsu sy Po-Lin Kuo. (2008). Andriamanitrametin dia mamporisika ny fahasamihafana Osteoblastic an'ny olombelona amin'ny alàlan'ny Protein Kinase C / p38 ary Extracellular Signal-Regulayed Kinase 1/2 Lalana. Journal of Bone and Mineral Research.
4.Androutsopoulos, VP, Mahale, S., Arrooo, RR, ary Potter, G. (2009). Vokatry ny anticancer an'ny Diosmetin Flavonoid momba ny fandrosoan'ny tsingerin'ny sela sy ny fitrandrahana MDA-MB 468 sela misy kansera noho ny fampiroboroboana ny CPY1. Tatitra momba ny oncolojika.
13 FIVAVAHANA SY FANADIKANA:
03. Horonantsary Diosmetin (520-34-3)
04. Fampahalalana momba an-tserasera Diosmetin
05. Tantaran'ny Powder Diosmetin
06. Ahoana no fiasan'ny mofomamy Diosmetin?
07. Ny tombo-tsakafo Diosmetin
08. Diosmetin Powder Dosis
09. Inona no vokatra misy an'i Diosmetin?
10. Andriamanitrametin Research
11. Fanampiny Diosmetin
13. FIVAVAHANA SY FANADIKANA: